Ukuphelelwa Kokuqhawulwa KwamaBuddha
Ukukhulula Ukususela ekuFomeni nasekuQiniselweni
Igama lokulahla livela rhoqo kwiingxoxo zamaBuddha. Kuthetha ukuthini, ngokuqinisekileyo?
"Ukulahla," ngesiNgesi, kuthetha ukunikela okanye ukuyeka, ukulahla okanye ukuphika. Kulabo bantu abanemvelaphi yobuKristu, oku kunokuvakala okunjenge-penance - uhlobo lokuzijezisa okanye ukunyanzela ukuhlawulela izono. Kodwa ukurhoxiswa kweBuddha kuhluke ngokupheleleyo.
Injongo Eyona Nzulu Yokwenqatshwa
Igama le-Pali elifumaneka kwi-sutras elidla ngokuguqulelwa ngokuthi "ukulahlwa" yi- nekkhamma .
Eli gama linxulumene negama lePali elisithetha "ukuphuma" kunye nokuthanda , okanye "ukukhanga." Ngokuqhelekileyo isetyenziswe ukuchaza isenzo se-monk okanye i-nun ephuma ebomini obungenamakhaya ukuba ikhululiwe ekukhanukeni. Nangona kunjalo, ukurhoxiswa kungafaka isicelo ukubeka isenzo kunye.
Ininzi ngokubanzi, ukurhoxiswa kunokuqondwa njengokuvumela ukuhamba kwezinto ezibophezela ekungazini nasekuhluphekeni. UBuddha wafundisa ukuba ukutshatyalaliswa ngokwenene kudinga ukuqonda ngokucacileyo indlela esizenza ngayo ukungonwabi ngokubamba nokuhaha . Xa senza, ukukhishwa ngokwemvelo kulandela, kwaye kuyisenzo esihle kunye nokukhulula, kungekhona isigwebo.
UBuddha wathi, "Ukuba, ngokuyeka ukukhululeka, wayeya kubona ukukhululeka, indoda eyakhanyisiwe yayiya kukhulula ukukhawuleza ngenxa yezinto ezininzi." (IDhammapada, ivesi 290, inguqulelo yeTinissaro Bhikkhu)
Kuqondakala ukuba ukuzinikela ekunandiseni ulonwabo kuyisithintelo esikhulu sokukhanyisa.
Umnqweno wobuhlobo, eqinisweni, ngowokuqala kwezinto eziyisihlanu eziphazamisayo ukukhanyisa eziza kunqotshwa ngokukhumbula. Ngengqondo, sibona izinto njengokuba kunjalo kwaye siyayiqonda ngokucacileyo ukuba ukubamba iminqweno yenyama kukuphela kokuphazamiseka kwesikhashana kwi- dukkha , uxinzelelo, okanye ukubandezeleka.
Xa ukuphazamiseka kuphelile, sifuna ukuqonda into enye. Oku kusibamba kusibophezela kwi-dukkha. Njengoko uBuddha wafundisa kwiZiQiniso ezine ezineNkcazo , unxano okanye umnqweno osibeka kumjikelezo ongapheli wokubamba kwaye usenza singaneliseki. Sihlala siphishekela i-karoti ngonaphakade.
Kubalulekile ukuqonda ukuba isinamathiselo kwintlalo yesithintelo esithintekayo. Yingakho nje ukuyeka into onokuyithandayo akuyonto. Ngokomzekelo, ukuba uye waqhubeka udla ukutya uyazi ukuba konke ukuzimisela kwakho ukuhlala kwisondlo akumiseli ukulangazelela ukutya okunonopheli. Ukuqwenela kukuxelela ukuba usenamathele kulolo lonwabo.
Ngelo xesha, kubalulekile ukuqonda ukuba ukuzonwabisa kwento akubi. Ukuba uthabatha ukutya kwaye uyifumane iyanandi, ngokuqinisekileyo akumele utyholile. Jolisa ukutya ngaphandle kokunamathiselwe . Yidla kuphela njengoko ufuna ngaphandle kokukrakra kwaye xa usuphelile, njengoko utsho i-zennies, "hlamba isitya sakho."
Ukurhoxiswa yinxalenye yenkalo yeNjongo yokuLungisa yeNdlela yesibhozo. Abantu abafaka ukuziphatha ngobomi be-monastic ngokwabo ukuba bayeke ukuphandle ukuzonwabisa kwenyama.
Uninzi lwee-monks kunye namadonti yi-colibate, umzekelo. Ngokwesiko, iidonki kunye neendwendwe zihlala ngokulula, zingekho izinto ezingenasidingo.
Njengabalingani, asikulindelekanga ukuba silahle amakhaya ethu size silale phantsi kwemithi, njengokuba oonobumba bamaBuddha baqala. Esikhundleni saloo ndlela, sizama ukuqonda ukuba izinto eziphathekayo kunye nokungaqhotyoshelwanga kubo.
Kwi- Theravada UbuBuddha , ukuchithwa ngenye yeeParamitas ezilishumi , okanye iziqhamo. Njengokugqibeleleyo, umkhwa wesiqhelo ukuqonda ngokuqwalasela indlela ukunandipha kwintlalo yolonwabo kungabangela indlela yokomoya.
E- Mahayana Buddhism , ukuchithwa kuba ngumkhuba we- bodhisattva wokuphuhlisa i- bodhicitta . Ngokusebenza, siyaqonda indlela ukuxhamla kwintlalo yolonwabo kusilahlekelwa ngayo kunye nokutshabalalisa i- equanimity . Ukubamba kwakhona kusenza sibe nobukratshi kwaye kusithintele ukuba sibe yinzuzo kwabanye.
Indlela yokufumana iSikolo soShishino